Kedu ihe usoro 7 nke mgbaze? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Usoro digestive usoro - otu esi edozi
Kedu ihe usoro 7 nke mgbaze?
Ihenri nriFiliks bụ ingestion, propulsion, n'ibumgbaze, mmiri ọgwụmgbaze, absorption, na mpopu.
N’ụwa nile, ná nkezi, ndị mmadụ na-eri ihe dị ka kilogram abụọ na kilogram 2.7 kwa ụbọchị. Nke ahụ karịrị kilogram 365 kwa afọ na mmadụ na ihe karịrị kilogram 28,800 na ndụ nke ndụ.
Ma ọbụna ndị ikpeazụ fọdụrụnụ na-aga site na sistemu digestive. Ihe mejupụtara akụkụ iri nke gbasara mita itoolu ma nwee ihe karịrị ụdị mkpụrụ ndụ 20 pụrụ iche, nke a bụ otu n'ime usoro dị iche iche na usoro mgbagwoju anya dị n'ahụ mmadụ. Akụkụ ya na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mezuo ọrụ pụrụ iche: ịtụgharị akụrụngwa nri gị na nri na ume na-eme ka ị dị ndụ.
Usoro nri gị na - agbatị ogologo ahụ gị ma mejupụta isi ihe anọ. Nke mbu, enwere uzo eriri afọ, uzo na-agbagọ agbagọ nke na-eburu nri gị, ma nwee mpaghara dị n'ime ala nke 30 ruo 40 square, nke ga-ezu iji kpuchie ọkara ụlọ badminton. Nke abuo, enwere pancreas, gallbladder, na imeju, ihe ato nke na-eme ka ihe oriri di iche iche na otutu ihe omuma di iche. Enzymes, hormones, irighiri akwara, na ọbara na-arụkọ ọrụ iji mebie nri, gbanwee usoro nri, na ọgwụgwụ ya ngwaahịa ịnapụta.
N'ikpeazụ, enwere mesentery, otu mpempe akwụkwọ buru ibu nke na-akwado ma na-edozi akụkụ ahụ gị niile na-agbari nri n'ime afọ, na-enye ha ohere ịrụ ọrụ ha. Usoro ntanye na-amalite tupu nri ọbụlagoro n’ire gị. Na atụmanya nke nri dị ụtọ, glands n'ọnụ gị na-amalite ịmị mmiri mmiri.
Anyị na-emepụta ihe dị ka lita 1.5 nke mmiri a kwa ụbọchị. I jiri nsụ mmiri na-agbachapụ, ị na-agbanwe nri ka ọ ghọọ ntụ mmiri, bolus.
Enzymes dị na mmiri na-agbaji starch ọ bụla. Mgbe ahụ nri gị dị na nsọtụ ogologo tube 25 centimita, akpịrị, nke ọ ga-eru afọ. Nerves dị n'akụkụ anụ ahụ gbara gburugburu na-ahụ ka ọnụnọ nke bolus na-ebute peristalsis, usoro a na-akọwa njigide akwara.
i kwesiri itu ahia igwe
Nke a na-akpali nri n'ime afọ, ebe ọ bụ na ebere nke afọ. Akụkụ akwara nke afọ nke na-ekekọta agba ma na-agbaji ya. Hormones zoro ezo site na mkpụrụ ndụ n'ime oghere nke afọ na-ebute ntọhapụ nke acid na ihe ọ enụ enụ nke enzyme bara ụba site na mgbidi afọ, nke na-amalite igbari nri ma mebie protein ya.
Homonụ ndị a na-emekwa ka pancreas, imeju, na gallbladder mepụta ihe ọ digesụ digesụ na-agbari nri ma bufee bile, mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo nke na-agbari abụba, na nkwadebe maka usoro ọzọ. Mgbe ọ nọrọ awa atọ n’afọ, bolus ahụ kpụrụ akpụ ugbu a bụ mmiri ọfụfụ a na-akpọ chyme. ọ dịkwa njikere ịbanye obere eriri afọ.
Imeju na - eziga eriri afọ na gallbladder, nke ọ na - abanye n'ime akụkụ nke mbụ nke eriri afọ nke akpọrọ duodenum. N'ebe a, ọ na - agbaze abụba ndị na - ese n'elu mmiri nke chymesos ma nwee ike gbarie ya ngwa ngwa site na pancreatic na nsia ihe ọ thatụ thatụ nke a sachara n'elu ebe ahụ. Ihe ọ Theseụ enụ ndị a nke enzyme bara ọgaranya na-agbaji ụmụ irighiri abụba n'ime abụba abụba na glycerin iji kwe ka nsị dị mfe n'ime ahụ, na-emecha mebie protein n'ime amino acid na carbohydrates n'ime glucose.
Nke a na-eme na mpaghara ala nke obere eriri afọ, jejunum na ileum, nke nde nde obere kpuchiri kpakpando a na-akpọ villi. Ndị a na-emepụta nnukwu ebe dị elu iji mee ka ọ dịkwuo elu na ịnyefe mkpụrụ ndụ n'ime ọbara. Ọ na-ewere ọbara ya na ụkwụ ikpeazụ nke njem ya iji zụlite akụkụ ahụ na anụ ahụ nke ahụ.
Ma ọ kabeghị. Ihe fọdụrụ, mmiri, na mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ nke a wụfuru n'oge mgbaze na-ejedebe na nnukwu eriri afọ, nke a makwaara dị ka nnukwu eriri afọ. Ahụ mmadụ na-ekpochapụ ọtụtụ mmiri fọdụrụnụ site na mgbidi eriri afọ.
Ihe foduru bụ igwe dị nro a na-akpọ stool. Colon na akwaba ngwa ahia a n’ime obere akpa a na akpo ikensi, ebe irighiri akwara na-adi ka o na-agbasa ma na-agwa ahu mgbe oge ruru ichu ahihia ahu. E mepụtara ihe ndị na-emepụta mgbaze site na nsogbu na ogologo njem nke nri, nke na-ewekarị oge 30 na 40.
Kedu usoro nke 4 nke mgbaze?
Enwerenzọụkwụ anọn'imeusoro mgbaze: ingestion, mmebi nke igwe na kemikal nke nri, nri nri, na mkpochapu nri indigestible.Ọgọst 13 2020
Kedu ihe nrịgo isii nke mgbaze?
Usoro nkemgbazegụnyeisiieme: ingestion, propulsion, n'ibu ma ọ bụ nke anụ ahụmgbaze, mmiri ọgwụmgbaze, absorption, na mpopu. Nke mbụ n'ime usoro ndị a, ingestion, na-ezo aka na ntinye nri n'ime ọwa mmiri site na ọnụ.12 nke 2020bọchị 2020
Kedu akụkụ iri na abụọ nke usoro digestive?
Isiakụkụ ahụnke na-emesistem afọ nri(n'usoro nke haọrụ) bụ ọnụ, akpịrị,afọ, obere eriri afọ, nnukwu eriri afọ, ikensi na ike. Inyere ha aka n’azu bu ohia, ahihia na umeji.Sep 13 2018
Gini bu uzo mbu nke mgbaze?
Ọnụ. Ọnụ bụ mmalite nkenri nritraktị. N'ezie,mgbazena-amalite ebe a ozugbo ị na-ewembụaru nke nri. I ata ata ata unam emi ẹsisịbedegbarie, mgbe asọ mmiri na-agwakọta na nri iji maliteusoronke ịgbari ya n'ụdị ahụ gị nwere ike ịmata ma jiri.June 21. 2020bọchị 2020
Kedu akụkụ 8 nke usoro digestive?
Isiakụkụ ahụnke na-emesistem afọ nri(n'usoro ọrụ ha) bụ ọnụ, akpịrị, afọ, obere eriri afọ, nnukwu eriri afọ, ikensi na ike. Inyere ha aka n’azu bu ohia, ahihia na umeji.Sep 13 2018
Kedu usoro nke 5 nke usoro digestive?
Kedu ụdị nri mgbaze 2?
Mgbazebụ ụdị catabolism ma ọ bụ ịkụda ihe ndị gụnyereabụọiche iche Filiks: n'ibumgbazena kemịkalmgbaze.Sep 18 2020
Gịnị bụ akụkụ iri na anọ dị na sistemu nri?
Isiakụkụ ahụnke na-emesistem afọ nri(iji rụọ ọrụ ha) bụ ọnụ, akpịrị,afọ, obere eriri afọ, nnukwu eriri afọ, ikensiunaike. Inyere ha aka n'uzo bu pancreas, eriri afonaumeji. Nke a bụ otú ndị aakụkụ ahụrụọ ọrụ ọnụ na gịsistemu nri nri.Sep 13 2018
Kedu ụdị nri mgbaze abụọ?
Mgbazebụ ụdị catabolism ma ọ bụ ịkụda ihe ndị gụnyereabụọiche iche Filiks: n'ibumgbazena kemịkalmgbaze.18.09.2020
Ogologo oge ole ka usoro mgbaze nri dị n’ime ahụ?
Akụkụ Ahụ Na-eme Ọgwụ Egwu. Iji na-eme ụda anyị ga-aghọta na usoro ahụ nri na-agbari n'ime atọ (ihe dịka) elekere elekere asatọ na oge elekere iri abụọ na anọ. Mgbaze nri (itinye aka na ntughari nri)
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka nri iji gabiga usoro nsị?
Oge mgbaze dị iche n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na n'etiti ndị nwoke na ndị nwanyị. I rie nri, o were ihe dika awa isii rue asatọ ka nri gabiga afo gi na obere eriri afo. Nri wee banye n’ime eriri afọ gị (eriri afọ) maka ịgbari nri, ịmịnye mmiri na, n’ikpeazụ, iwepụ nri na-enweghị nri.
ụlọ ọrụ ịgba ígwè
Kedu ka usoro nri si arụ ọrụ n’ime ahụ mmadụ?
Ezubere usoro nri gị nke ọma iji tụgharịa nri ị na-eri ka ọ bụrụ nri na-edozi ahụ, nke ahụ na-eji maka ike, uto na mmezi sel. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ. Ọnụ bụ mmalite nke tract digestive. N'ezie, mgbaze na-amalite ebe a ozugbo i riri nri mbụ.